bing + twitter = fikarohana ara-potoana | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 22, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Microsoft dia naneho endrika vaovao ho an'ny motera fikarohana Bing- ny fikarohana twitter. Any amin'ny bing.com/twitter no misy azy ary efa velona. Araka ny filazan'i Microsoft, ity dia dingana iray lehibe mankany amin'ny fikarohana izay miankina amin'ny angon-drakitra tena izy fa tsy ny rohy voatahiry. Ny lazan'ny tweeter dia hisy fiatraikany amin'ny valin'ny laharana.
Nanaraka haingana an'i Microsoft i Google (tsy henonao matetika izany!) Ary nanambara ny azy manokana fikarohana amin'ny fotoana tena izy any aoriana.
Ny fahafaha-mikaroka amin'ny fotoana tena izy dia fanafody ho an'ny orinasan'ny motera fikarohana ary hitako fa ny fampifangaroana ny haino aman-jery sosialy malaza iray dia afaka manome sisiny mifaninana saingy hitako ihany koa fa nanakorontana ny valin'ny karoka.
Avy amin'ny fomba fijery marketing dia mieritreritra aho fa afaka manome fotoana lehibe ho an'ny orinasa mpamaky haino aman-jery sosialy hampiroborobo ny tenany na ny vokariny. Hatramin'ny nanamboaran'ny motera fikarohana fahaiza-manao RSS, dia hanaporofo izany koa fa tena mifaninana izy - satria afaka mamaly sy mamaly ireo bitsika tena izy ny orinasa! Tokony hamorona fampandrenesana taonina amin'ny fifaninanana, indostria ary orinasa ianao raha vantany vao mivoaka ny valiny.
Maninona raha ampidirina amin'ny valin'ny twitter ny valiny avy amin'ny fikarohana tsy tapaka? Raha mila mandeha amin'ny motera fikarohana hafa aho hitadiavana valiny twitter, maninona raha mitady twitter fotsiny amin'ny alàlan'ny tweetdeck, seesmic na mpanjifa birao hafa? Thoughts?
Tags: apuivalin'ny orinasafakan-tsary +Cokemarketing ara-tsosialy
Marketpath - fitantanana votoaty tsotra
Oct 23, 2009 amin'ny 1: 44 AM
Rehefa nampiasa ny fikarohana tao amin'ny Twitter, dia tena hahaliana ny mahita hoe inona avy ireo fitaovana mivoaka amin'ny famoahana ity fampahalalana ity amin'ny motera fikarohana izay ahafahan'ny olona manangana rindranasan'ny antoko fahatelo amin'izy ireo.
Oct 23, 2009 amin'ny 4: 45 AM
Heveriko fa ny zavatra tena mahaliana tokony ho tadiavina eto dia ny valin'ny fikarohana amin'ny fotoana tena izy dia miorina amin'ny fahefana (retweets sy # mpanaraka), izany dia hanome tsindry betsaka amin'ireo orinasa ho lasa mpandray anjara mavitrika amin'ny fifanakalozan-kevitra.
Ny fampielezana hafatra amin'ny twitter dia lasa fomba fanao tsy misy dikany. Ny fitaomana ny olona, ​​averina apetaka ny atiny, ny olona manampy ny 'lisitra' na ny #FF no ipetrahan'ny hery rehetra.
Ny teny hoe 'mifandraisa dieny izao' dia ny mantra vaovao amin'ny tranonkala.
25 Okt 2009 amin'ny 12:55 PM
Ny fikarohana Bing Twitter dia tsy misy ao amin'ity toerana ity.
Raha te hiditra amin'ny Bing Twitter Search ianao dia ovao Etazonia ny toerana misy anao. "